June 2020 - The Moon MM
လွန်ခဲ့တဲ့ 10 နှစ်ကယောကျာ်းဆိုးဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အခုချိန်မှာမိသားစုအတွက် ဖခင်ကောင်းနဲ့ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေပြီ ဆိုတဲ့ အာဘွိုင်း
ပရိသတ်ကြီးရေ အာဘွိုင်းကတော့ လူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့သီချင်းလေးတွေကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ထပ်တူကျခဲ့တဲ့သီချင်းလေးတွေဖြစ်ပြီး လတ်တလောမှာဆိုရင်တော့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုနဲ့အတူသီဆိုထားတဲ့ အငွေ့အသက်များ ဆိုတဲ့သီချင်းလေးထွက်ရှိပါတယ်။ အာဘွိုင်းကတော့ မင်းသမီးချောလေးမြတ်ရတနာကျော်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးတစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဘွိုင်းနဲ့ မြတ်ရတနာကျော်ကတော့ သူ့တို့ရဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို နားလည်အပြည့်နဲ့တည်ဆောက်ထားပြီး ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ အာဘွိုင်းက သူ့ရဲ့မိသားစုလေးအတွက် အကောင်းဆုံးတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်းလေးကို အခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အာဘွိုင်းကတော့ “ လွန်ခဲ့တဲ့ 10 နှစ်က ငါယောကျာ်းဆိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်.ဒါပေမယ့် အခုတော့ ဒီမိသားစုအတွက် ငါက ဖခင်ကောင်းနဲ့ ခင်ပွန်းကောင်း တစ်ယောက်ဆိုတာ သေချာအောင်လုပ်နေပြီ ။ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ဘယ်တော့မှ နောက်မကျဘူးလို့ ငါထင်တယ် ။အချစ်ရဆုံး Myat အရာအားလုံးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။”ဆိုပြီး သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…။ Source-Kyaw Phyo Tun Zawgyi လြန္ခဲ့တဲ့ 10 ႏွစ္ကေယာက်ာ္းဆိုးျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ အခုခ်ိန္မွာမိသားစုအတြက္ ဖခင္ေကာင္းနဲ႔ခင္ပြန္းေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို့ျကိုးစားေနျပီ … Read more
မန္တလေးFMမှာ ရုပ်ရှင်လောကသားတွေနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးသီချင်းလေးတစ်ပုဒ်တောင်းပေးခဲ့တဲ့ ကိုပေါက်ရဲ့ဗီဒီယိုလေး
ပရိသတ်ကြီးရေ ကိုပေါက်ကတော့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အပြင် ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အနေနဲ့ပါအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ကိုပေါက်ကတော့ ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး စိတ်သဘောထားပြည့်ဝသူဖြစ်သလို အလှူအတန်းတွေလည်း မကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသူတစ်ဦးလဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုပေါက်ကတော့ ဘေးနားကပါရမီဖြည့်ပေးနေတဲ့ချစ်ဇနီးလေးနဲ့အတူသားလေးနှစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကိုတည်ဆောက်ထားနိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ကိုပေါက်ကတော့ အိမ်မှာနေရင်း ပရိသတ်တွေ ရယ်မော်ပျော်ရွှင်စေဖို့အတွက် ဟာသ tik tok ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်း အမြဲတင်ပေးလေ့လဲရှိပါတယ်။ ဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်း ကိုပေါက်က ရုပ်ရှင်လောကသားတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး လိုက်ဖက်တဲ့သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို မန္တလေးFMမှာတောင်းပေးလိုက်တဲ့ဟာသဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ကို နင်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဗီဒီယိုလေးကိုတော့ မန္တလေးFMမှာ သီချင်းတောင်းလိုက်တယ်”ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့အတူတင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း ကိုပေါက်ရဲ့ဟာသဗီဒီယိုလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်…။ Source-Aung Min Naing Zawgyi မႏၲေလးFMမွာ ရုပ္ရွင္ေလာကသားေတြနဲ့ အလိုက္ဖက္ဆံုးသီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္ေတာင္းေပးခဲ့တဲ့ ကိုေပါက္ရဲ့ဗီဒီယိုေလး ပရိသတ္ျကီးေရ ကိုေပါက္ကေတာ့ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္အျပင္ ဒါရိုက္တာတစ္ေယာက္အေနနဲ့ပါေအာင္ျမင္မွဳေတြရရွိေနတဲ့အနုပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ကိုေပါက္ကေတာ့ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ျပီး စိတ္သေဘာထားျပည့္၀သူျဖစ္သလို အလွူအတန္းေတြလည္း မျကာခဏျပုလုပ္ေလ့ရွိသူတစ္ဦးလဲျဖစ္ပါတယ္။ ကုိေပါက္ကေတာ့ ေဘးနားကပါရမီျဖည့္ေပးေနတဲ့ခ်စ္ဇနီးေလးနဲ့အတူသားေလးနွစ္ေယာက္ပုိင္ဆိုင္ထားျပီး ေပ်ာ္ရႊင္စရာမိသားစုဘ၀ေလးကိုတည္ေဆာက္ထားနိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ကိုေပါက္ကေတာ့ အိမ္မွာေနရင္း ပရိသတ္ေတြ ရယ္ေမာ္ေပ်ာ္႐ႊင္ေစဖို႔အတြက္ ဟာသ … Read more
ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်နေမင်းကိုတော့ပရိသတ်ကြီးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ နေမင်းကအနုပညာအလုပ်တွေကိုခဏတာရပ်နားထားပြီး စိတ်တွေအရမ်းမွမ်းကျပ်နေလို့ သူ့ရဲ့မြို့လေးဖြစ်တဲ့သက္ကလမြို့လေးကိုအလည်ရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ တောဓလေ့အတိုင်းလယ်ကွင်းတွေနဲ့သာယာလှပတဲ့ သက္ကလမြို့လေးကိုနေမင်းတို့မင်းသားစုလိုက်ရောက်ရှိနေပြီး အေးအေးချမ်းချမ်းအနားယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။နေမင်းကတော့သူ့ရဲ့မြို့လေးတိုးတက်ဖို့အတွက်လည်း တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေတတ်နိုင်သလောက်ထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးနေသူတစ်ယောက်ပါ။ လက်ရှိမှာလည်း ရွာလမ်းလေးကောင်းဖို့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့အကြောင်း ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းလေးကိုတော့ “လမ်းပြင်နေသည်”ဆိုပြီးဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအတွက် ကိုယ်တိုင်လမ်းပြင်နေတဲ့နေမင်းတို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို သာဓုခေါ်လို့ရအောင်ပြန်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။ Source:Nay Min Zawgyi ႐ြာလမ္းေလးေကာင္းဖို႔အတြက္ သူကိုယ္တိုင္ျပဳျပင္ေပးေနတဲ့ ေနမင္း ျပည္သူခ်စ္အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေနမင္းကိုေတာ့ပရိသတ္ႀကီးလည္းသိၿပီးသားျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ေနမင္းကအႏုပညာအလုပ္ေတြကိုခဏတာရပ္နားထားၿပီး စိတ္ေတြအရမ္းမြမ္းက်ပ္ေနလို႔ သူ႔ရဲ႕ၿမိဳ႕ေလးျဖစ္တဲ့သကၠလၿမိဳ႕ေလးကိုအလည္ေရာက္ရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေတာဓေလ့အတိုင္းလယ္ကြင္းေတြနဲ႔သာယာလွပတဲ့ သကၠလၿမိဳ႕ေလးကိုေနမင္းတို႔မင္းသားစုလိုက္ေရာက္ရွိေနၿပီး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းအနားယူေနတာျဖစ္ပါတယ္။ေနမင္းကေတာ့သူ႔ရဲ႕ၿမိဳ႕ေလးတိုးတက္ဖို႔အတြက္လည္း တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေနတတ္ႏိုင္သေလာက္ေထာက္ပံ့လႉဒါန္းမႈေတြကိုျပဳလုပ္ေပးေနသူတစ္ေယာက္ပါ။ လက္ရွိမွာလည္း ႐ြာလမ္းေလးေကာင္းဖို႔အတြက္သူကိုယ္တိုင္ျပဳျပင္ေပးေနတဲ့အေၾကာင္းပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႔အတူသူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္မွာေဖာ္ျပထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းေလးကိုေတာ့ “လမ္းျပင္ေနသည္”ဆိုၿပီးေဖာ္ျပထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ကိုယ္တိုင္လမ္းျပင္ေနတဲ့ေနမင္းတို႔ရဲ႕ဗီဒီယိုဖိုင္ေလးကို သာဓုေခၚလို႔ရေအာင္ျပန္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
ပရိသတ်ကြီးရေ စိန်လင်း(Aroma) ကတော့ အချစ်သီချင်းကောင်းလေးကို သီဆိုပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို များစွာရရှိထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့သီချင်းတွေက ပရိသတ်တွေရဲ့အကြိုက်နဲ့ထပ်တူကျပြီး အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။စိန်လင်းကတော့ မကြာသေးခင်ကပဲ စုန်းမ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးထွက်ရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စိန်လင်း(Aroma) ကတော့ အလှူအတန်းလဲရက်ရောသူဖြစ်တာကြောင့် မကြာခဏဆိုသလို အလှူအတန်းတွေပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်း စိန်လင်း တွံတေးမြို့ ကျောင်းသစ်ကျောင်းတိုက်မှာ ဦးစန္ဒောဘာသ ဘွဲ့အမည်ဖြင့် ရဟန်းဝတ်ပြီး ကုသိုလ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စိန်လင်းကတော့ ကျောင်းရှိသံဃာတော်များကိုလည်း နေ့ဆွမ်းဆပ်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ပရိသတ်ကြီးအတွက်ဒီနေ့မှာ သာသနာ့ဘောင်ကို ဝင်ရောက်ပြီး ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်နေတဲ့ စိန်လင်းရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်…။ Source-Aroma Zawgyi တြံေတးျမို့ ေက်ာင္းသစ္ေက်ာင္းတိုက္မွာ ရဟန္း၀တ္ျပီး ေက်ာင္းရွိသံဃာေတာ္မ်ားကို ေန့ဆြမ္းဆပ္ကပ္ လွူဒါန္းခဲ့တဲ့ စိန္လင္း(Aroma) ပရိသတ္ႀကီးေရ စိန္လင္း(Aroma) ကေတာ့ အခ်စ္သီခ်င္းေကာင္းေလးကို သီဆိုၿပီး ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးခ်စ္ခင္မႈကို မ်ားစြာရရွိထားသူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။သူရဲ႕သီခ်င္းေတြက ပရိသတ္ေတြရဲ႕အႀကိဳက္နဲ႕ထပ္တူက်ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိခဲ့ပါတယ္။စိန္လင္းကေတာ့ … Read more
ရုပ်ရှင်နဲ့ဗွီဒီယိုသရုပ်ဆောင်ပိုးအိအိခန့်ကတော့ နိုင်ငံကျော်ဘောလုံးသမားအောင်သူနဲ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ်မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ အိမ်ထောင်ရှင်မကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ မိသားစုကိုပဲ အချိန်ပေးပြီး သားကိုးလေးကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနေတဲ့ မေမေပိုးအိအိခန့်ကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့ပေမယ့်လည်း ပရိသတ်အားပေးမှုအခိုင်အမာရရှိနေစဲပါ။ သူကတော့ အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ် မပြတ်ရအောင် သားကိုးလေးရဲ့တနေ့တာအကြောင်းအရာတွေကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သားကိုးလေးရဲ့ မေမေ့ကိုအရမ်းခင်တွယ်ပြီး အအိပ်ဆတ်တဲ့အကြောင်းကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ “အသားချင်းထိပြီး အဲ့လိုကပ်အိပ်နေရမှ အမေထတာနဲ့ အမေကိုစမ်း မရှိတာနဲ့ လိုက်ထတာ.. ခုလည်း အိပ်နေတာကြာပြီ မထသေးဘူး…. ကြီးလာတော့ အသားကုန်ဆော့ ပင်ပန်းပြီး အသားကုန်အိပ် မေ့ ချစ်ကလေး” ဆိုပြီး သားကိုးလေးရဲ့အကြောင်းတွေကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ သားကိုးလေးကတော့ မေမေနဲ့အသားချင်းကပ်ပြီးအိပ်မှ အိပ်ပျော်တဲ့ မေမေ့ကို အရမ်းခင်တွယ်တဲ့ကလေးလေးပါတဲ့နော်။ မေမေပိုးအိအိခန့်ကတော့ ချစ်စဖွယ်အိပ်နေတဲ့ သားကိုးလေးကိုကြည့်ပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် မျှဝေပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ credit-cele … Read more
ပုရိသတွေကြားမှာအရမ်းကိုရေပန်းစားအောင်မြင်နေတဲ့ မော်ဒယ်၊သရုပ်ဆောင်စူးရှထက်ကိုတော့ပရိသတ်ကြီးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့စူးရှထက်က အနုပညာအလုပ်အပြင်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဖက်ရှင်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားပြီး သူမကိုယ်တိုင်ဦးစီးကာရောင်းချနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စူးရှထက်ကတော့ အလှူအတန်းဘက်မှာလည်းရက်ရောသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေအတွက် တတ်နိုင်သလောက်ထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း လမ်းပေါ်မှာငုံးဥရောင်းနေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီး မုန့်ဖိုးအပါအဝင်မိုးကာအင်္ကျီနဲ့စားစရာတွေကိုလှူဒါန်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါအလှူအကြောင်းလေးကိုတော့ “မောင်လေးရေ မိုးရွာရင်မိုးကာအင်္ကျီလေးဝတ်ရောင်းရအောင်လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတော့သူ့မှာပျော်နေတယ် ရော့စားစရာရော့မုန့်ဖိုးဆိုတော့သူမှာအံသြပြီး ပျော်ရွှင်နေတဲ့မျက်နှာလေးမကြီး သားငုံဥလေးကျွေးချင်လို့တဲ့မကြီးကတစ်ထုပ်နဲ့မဝဘူးနှစ်ထုပ်ပေးလို့ခလေးဆီကဓါးပြတိုက်ခဲ့တယ်စားလို့ကောင်းလိုက်တဲ့ ငုံဥ”ဆိုပြီးသူမအကောင့်မှာဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရေ စူးရှထက်ရဲ့အလှူအတါက်သာဓုခေါ်ခဲ့ကြပါဦးနော်..။ Source:Sue Sha Htet Zawgyi လမ္းေပၚမွာေဈးေရာင္းေနတဲ့ေကာင္ေလးကို မုန႔္ဖိုးနဲ႔စားစရာေတြအျပင္မိုးကာအက်ႌကိုပါလႉဒါန္းေပးခဲ့တဲ့ စူးရွထက္ ပုရိသေတြၾကားမွာအရမ္းကိုေရပန္းစားေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ေမာ္ဒယ္၊သ႐ုပ္ေဆာင္စူးရွထက္ကိုေတာ့ ပရိသတ္ႀကီးလည္းသိၿပီးသားျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ လတ္တေလာမွာေတာ့စူးရွထက္က အႏုပညာအလုပ္အျပင္ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ဖက္ရွင္ဆိုင္ေလးတစ္ဆိုင္ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး သူမကိုယ္တိုင္ဦးစီးကာေရာင္းခ်ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ စူးရွထက္ကေတာ့ အလႉအတန္းဘက္မွာလည္းရက္ေရာသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့သူေတြအတြက္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ေထာက္ပံ့လႉဒါန္းမႈေတြကိုျပဳလုပ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ လက္ရွိမွာလည္းလမ္းေပၚမွာငုံးဥေရာင္းေနတဲ့ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ကိုေခၚၿပီး မုန႔္ဖိုးအပါအဝင္မိုးကာအက်ႌနဲ႔စားစရာေတြကိုလႉဒါန္းေပးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အဆိုပါအလႉအေၾကာင္းေလးကိုေတာ့ “ေမာင္ေလးေရမိုး႐ြာရင္မိုးကာအက်ႌေလးဝတ္ေရာင္းရေအာင္လက္ေဆာင္ေပးမယ္ဆိုေတာ့သူ႔မွာေပ်ာ္ေနတယ္ ေရာ့စားစရာေရာ့မုန႔္ဖိုးဆိုေတာ့သူမွာအံၾသၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္ေနတဲ့မ်က္ႏွာေလးမႀကီး သားငုံဥေလးေကြၽးခ်င္လို႔တဲ့မႀကီးကတစ္ထုပ္နဲ႔မဝဘူးႏွစ္ထုပ္ေပးလို႔ခေလးဆီကဓါးျပတိုက္ခဲ့တယ္စားလို႔ေကာင္းလိုက္တဲ့ ငုံဥ”ဆိုၿပီးသူမအေကာင့္မွာေဖာ္ျပထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ပရိသတ္ႀကီးေရ စူးရွထက္ရဲ႕အလႉအတါက္သာဓုေခၚခဲ့ၾကပါဦးေနာ္..။
နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာ ကျော်သူကတော့ တစ်ခေတ်တစ်ခါကနေ ယနေ့အချိန်အထိ အောင်မြင်မှုအခိုင်အမာရရှိထားပြီး နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) မှာ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်တာဝန်ယူကာ မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ ပြည်သူ့အကျိုးပြု ပရဟိတအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ သူဟာ “အပေးအယူ” ဆိုတဲ့ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ကိုယ်တိုင်ရေးသားထားကာ ထုတ်ဝေတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်သူကတော့ မင်းသားဘဝက အော်တိုထိုးပေးရသည့် စံချိန်ကို စာအုပ်ထုတ်တော့မှ ချိုးလိုက်တဲ့အကြောင်းကို “ကျွန်တော့် ပရိသတ်များအတွက် ကျွန်တော်ရေးသားထားသည့် “အပေးနဲ့အယူ” စာအုပ် ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း “ဆန်းစသော်တာ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး” မှ စတင်ထွက်ဝေတော့မည်ဖြစ်ရာ အားပေးသည့် ပရိသတ်များအတွက် ယနေ့ အမှတ်တရ လက်မှတ်များထိုးပေးခဲ့ရာ ယခင် မင်းသားဘဝက အော်တိုထိုးပေးရသည့် စံချိန်သစ် ချိုးခဲ့ရပါပြီ။ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးရင်းဖြင့် သာဓု သာဓု သာဓုဟု ဝယ်ယူ … Read more
ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စိုးပြည့်သဇင်ကိုတော့ပရိသတ်ကြီးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူမကတော့အနုပညာမျိုးဆက်ကဆင်းသက်လာသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာသာမကအဆိုင်ပိုင်းမှာလည်း ထူးချွန်သူတစ်ယောက်ပါ။ စိုးပြည့်သဇင်ဟာညီအစ်မတွေဖြစ်တဲ့ စိုးမြတ်သူဇာ၊စိုးမြတ်နန္ဒာနှင့်စန္ဒီမြင့်လွင်တို့နဲ့အတူ အပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်တစ်ခုအနေနဲ့ မင်းသမီးပိုးထည်တိုက်ကိုတည်ထောင်ပြီးအောင်မြင်မှုရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ လတ်တလောမှာအနုပညာအလုပ်တွေကိုခဏတာရပ်နားထားပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်တော့ tik tokဗီဒီယိုလေးတွေကိုရိုက်ကူးကာသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့စိုးပြည့်သဇင်ကညီအစ်မတွေနဲ့ tik tok ကစားတိုင်းအရိုက်ခံနေရတဲ့အကြောင်းကို ရင်ဖွင့်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။. အဲဒီအကြောင်းကိုတော့ စိုးပြည့်သဇင်က “ငါ..tit tokဆော့တိုင်းအရိုက်မခံရတာမရှိပါလား”ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူရင်ဖွင့်ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် Source:Soe Pyae Thazin Zawgyi အစ္မေတြနဲ႔ tik tok ကစားတိုင္းအ႐ိုက္ခံေနရတဲ့အေၾကာင္း ရင္ဖြင့္လာတဲ့စိုးျပည့္သဇင္ ျပည္သူခ်စ္အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ စိုးျပည့္သဇင္ကိုေတာ့ပရိသတ္ႀကီးလည္းသိၿပီးသားျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ သူမကေတာ့အႏုပညာမ်ိဳးဆက္ကဆင္းသက္လာသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္းမွာသာမကအဆိုင္ပိုင္းမွာလည္း ထူးခြၽန္သူတစ္ေယာက္ပါ။ စိုးျပည့္သဇင္ဟာညီအစ္မေတြျဖစ္တဲ့ စိုးျမတ္သူဇာ၊စိုးျမတ္နႏၵာႏွင့္စႏၵီျမင့္လြင္တို႔နဲ႔အတူ အျပင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္တစ္ခုအေနနဲ႔ မင္းသမီးပိုးထည္တိုက္ကိုတည္ေထာင္ၿပီးေအာင္ျမင္မႈရရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ သူမကေတာ့ လတ္တေလာမွာအႏုပညာအလုပ္ေတြကိုခဏတာရပ္နားထားၿပီး ပရိသတ္ေတြနဲ႔အဆက္အသြယ္မျပတ္ေအာင္ေတာ့ tik tokဗီဒီယိုေလးေတြကို႐ိုက္ကူးကာသူမရဲ႕လူမႈကြန္ရက္ကေနတင္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့စိုးျပည့္သဇင္ကညီအစ္မေတြနဲ႔ tik tok ကစားတိုင္းအ႐ိုက္ခံေနရတဲ့အေၾကာင္းကို ရင္ဖြင့္ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။. အဲဒီအေၾကာင္းကိုေတာ့ စိုးျပည့္သဇင္က “ငါ..tit … Read more
ဖြိုးပြည့်စုံကတော့ သီချင်းအေးအေးလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်အားပေးမှုအခိုင်အမာရရှိထားပြီး သူဟာ Melody World သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေ ဂီတလောကထဲကို ဝင်ရောက်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတစ်ကိုယ်တော်အခွေဖြစ်တဲ့ ” မျှော်နိုင်သမျှ” အခွေထွက်ရှိထားကာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုအခိုင်အမာရရှိထားပြီး Single Song များစွားလည်း ထွက်ရှိထာပါတယ်။ ဖြိုးပြည့်စုံကတော့ မကြာသေးမီကလည်း မိစန္ဒီနဲ့အတူ Covid-19 ပညာပေးသီချင်းဖြစ်တဲ့ ” Go Away Corona” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို တွဲဖက်သီဆိုခဲ့ကာ ပရိသတ်တေါရဲ့ တစ်ခဲနကအာပေးမှုကို သိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ သူဟာ ပရဟိတစိတ်အပြည့်နဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက် ရေးစပ်ထားတဲ့သီချင်းလေးမှာ ပါဝင်သီဆိုသွားမယ့်အကြောင်းကို “ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေ လုပ်အားတွေကို ငွေကြေးတစုံတရာကြောင့် မဟုတ်ပဲနဲ့ မိမိရဲ့ ဆန္ဒအရ ပရဟိတစိတ်နဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းတိုင်းကို ကျွန်တော်တို့လေးစားပါတယ် Coming soon” လို့ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ … Read more
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲအနုပညာရှင်တွေရဲ့လက်စွဲတော်ဖြစ်တဲ့ မိတ်ကပ် လင်းလင်းကတော့ မိတ်ကပ်ပညာမှာထူးချွန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။လင်းလင်းကတော့ စကားပြောဆိုရာမှာလည်း ပွင့်လင်းပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုအမူလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကိုလည်း အခိုင်အမာရရှိထားသူတစ်ဦးပါ။ မိတ်ကပ်ပညာမှာ ထူးချွန်တဲ့ လင်းလင်းကတော့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဆိုရင်တော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေပါ ရိုက်ကူးနေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။လင်းလင်းကတော့ ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ ချစ်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ညီညီမောင်ရဲ့ (၃၉ )နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အမှတ်တရပုံလေးတွေနဲ့အတူ ထူးခြားတဲ့ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းလေးတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ လင်းလင်းကတော့ “ Happy birthday ချစ်သူငယ်ချင်းမမသုဘဝမှာကိုယ်လိုချင်တာ🦋💋မှန်သမျှပိုင်ဆိုင်ရပါစေရှင့်😘”ဆိုတဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးနဲ့ အတူ အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကလည်း ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ ညီညီမောင်(စမ်းချောင်း)ရဲ့ မွေးနေ့လေးအတွက် ဆုမွန်ကောင်းလေးတောင်းပေးခဲ့ပါအုံးနော်…။ Source-Lin Linn Zawgyi သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူညီညီေမာင္(စမ္းေခ်ာင္း)အတြက္ အမွတ္တရပံုေလးေတြနဲ့အတူ ထူးျခားတဲ့ေမြးေန့ဆုမြန္ေကာင္းေလးေတာင္းေပးခဲ့တဲ့ လင္းလင္း ပရိသတ္ျကီးေရ ဒိတ္ဒိတ္က်ဲအနုပညာရွင္ေတြရဲ့လက္စြဲေတာ္ျဖစ္တဲ့ မိတ္ကပ္ လင္းလင္းကေတာ့ မိတ္ကပ္ပညာမွာထူးခ်ြန္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီးေအာင္ျမင္မွဳေတြရရွိေနသူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။လင္းလင္းကေတာ့ စကားေျပာဆိုရာမွာလည္း ပြင့္လင္းျပီး … Read more